Michael Carrick oo qishay in uu ku laalo doono kabihiisa Old Trafford – Gool FM
Michael Carrick oo qishay in uu ku laalo doono kabihiisa Old Trafford
Kaafi April 12, 2017
(Manchester) 12 Abriil 2017. Laacibka khadka dhexe e Manchester United Michael Carrick ayaa meesha ka saaray ku biiridda Newcastle United xagaaga soo socda isaga oo qishay in uu kabihiisa ku laali doono Old Trafford.
Qandaraaska uu 35 jirka kula jiro Manchester United ayaa dhici doona bisha Juunyo waliba go’aan lagama gaarin aayihiisa.
Waxa uu ku koray taageerenimada Newcastle balse waxa uu cadeeyey in uusan ka dheeli doonin St. James Park.
“Maya, waxaan qabaa taas in ay hada dhaaftay,” ayuu Carrick u sheegay MOTD Magazine mar la weydiiyey suurtagalnimada ah in uu u wareegayo Newcastlel.
“Markii aan yaraa waxaan taageerayey Newcastle, waan ku riyoon jiray maalin In aan sameyn doono laakiin waxaan isku xisaabiyaa aad in aan u nasiib badanahay muddo dheer in aah u ciyaaray Manchester United.
“Waa uun mid ka mida xaalada aadan wax walba heli Karin. Hadii iyo marka aan ku dhameenayo Manchester United, taas waan ka fekeri foonaa.
“Isma qadimayo, muddo dheer ayaan halkan joogay waana ku raaxeystay, uma dheeli doono koox kale oo England ah taas waa hubaal.
“Waan arki doonnaa waxa dhaca, dhabtii ma hayo qorshe tan ka fog, waxaan ku raaxeysanayaa sida ay tahay daqiiqad walba.”
"Marka ay kubadda cagta mideyso dunida", - Jamaahiirta BVB oo guryohooda u waday kuwii Monoco xalay [Sawirro]
Milan iyo Inter oo isku garbinaya saxiixa Moreno